Ngenxa yokuthi namuhla baye baba imikhiqizo ethandwa kakhulu ukukhiqizwa newayini kanye newayini, waqala ukuhlakulela izinhlobo ezehlukene amagilebhisi, hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi kwamanye amazwe angaphandle. Ngenxa yalesi ukuthandwa okwandayo atholwe amagilebhisi Rizamat.
Incazelo nezici yalesi ezihlukahlukene
Amagilebhisi has a imbali ukuthi ngithanda abesilisa nabesifazane. Le mikhakha yile naphakathi ngobukhulu, futhi ezimweni eziningi ezinkulu. Ngo isisindo bangakwazi afinyelela 3000 amagremu, isithelo ngobukhulu - 45h25 mm. Ziyakwazi cylindrical isesimweni, umbala ophuzi-pink nge edging emibala, uma sesivuthiwe ngokugcwele bomvu. Izithelo uginindela yalesi ezihlukahlukene kunzima futhi esinamanzi-namanzi, nelambu Muscat ukunambitheka avulekile. Grebenozhka ngokubomvu luhlaza. Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi Rizamat inokuqukethwe ezinhle likashukela 23 ku-25% asidi nokulinganisela 5 g / l. Ezivuthiwe amakhiwane ekupheleni Agasti. Ngezinye izikhathi ungakwazi ukushintsha ukuma okusaqanda eside, futhi kwezinye izimo - nxazonke.
Ngokuvamile uhlangabezana Rapids, ezimila kusukela amaqoqo amabili, enye yazo has eside, amajikijolo, futhi ngakolunye - round.
Lolu hlobo ezihlukahlukene libhekisela eyingqabavu futhi okuyiwona formirovki ezinkulu ezidingekayo. Ukukhiqiza uphakeme kakhulu, kangangokuthi ngo Rostov-on-Don nasesikhathini Ukraine laseDonetsk esifundeni amagilebhisi Rizamat waklonyeliswa wendondo yegolide. Ngaphezu kwalokho, kuyinto enhle kakhulu kusindisa hhayi ukunambitheka kuphela, kodwa futhi ebukeka ngayo. Ngezinye izikhathi izimpande ukukhanya zasemoyeni zingavela zokhuni ubudala. Ubizwa kahle zokuhamba ukusetshenziswa fresh, kanye ezihlukahlukene kwemvelo.
Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi Rizamat kuyahluka amahlumela eqinile uvuthwe ezingaphezu kuka 2/3 ubude. Kulesi cluster density okuxekethile naphakathi, ukuze wonke amajikijolo uvuthwe ngokulinganayo futhi musa ukuwohloka phakathi yemvula.
Isici esiyinhloko Rizamat umvini ukuthi izinzuzo zayo engabathinti iminyovu, abanakho ukuthambekela ngokuhlaziya, futhi igcinwe kahle.
ukuze isikhutha ukumelana kakhulu futhi kufana 7 amaphuzu. Ukumelana grey isikhunta, isikhutha, phylloxera Namanje hhayi ncamashi ezaziwayo.
Amagilebhisi Rizamat has a isici: omuhle, omkhulu, isethulo esihle futhi izithelo amaqoqo. Ukuze ukuthi sithandwa futhi lihlonishwa abatshali eziningi kanye winemakers.
Amagilebhisi: zokutshala nokunakekela
Phakathi okutshalwe yamagilebhisi izithombo at phakathi odnoploskostnoy olele kunconywa ukushiya ibanga cishe 2.5 amamitha, kodwa lapho-indiza ezimbili -. Mayelana 3 m Uma wenza kokwehla olulodwa, kuleso simo sezihlahla kungcono ibekwe emaphethelweni uchungechunge zakhe isithombe. Kulesi zakhe isithombe kufanele libe 6 izintambo. Umthwalo oyinhloko isivuno siba ucingo lokuqala phansi, ngakho-ke kumele ngokwanele asekelwe.
Lokhu ezihlukahlukene kutshalwa ngendlela elifanayo nalelo elisetshenziswa abanye, kodwa ayiqondakali umelana yezimo ezimbi zezulu. Ukusoka amagilebhisi okudingeka ukwenze eside, okungukuthi, kusuka 12 kuya izimbobo 14. Omunye ehlathini kufanele ibe umthwalo izimbobo bengekho ngaphezu kwama-60. Uma siyiqaphele amandla wokukhula, isibalo izimbobo zingandiswa kulingana endaweni futhi sidala kangakanani isihlahla. Kodwa khumbula ukuthi isivuno kufanele benganhlanhlathi: kwenye umvini akufanele kube abangaphezu koyedwa cluster. Yokukhipha okungadingekile engqondweni arcade kwenziwa ekwindla, ukuze ugweme ukulahlekelwa.
Ngaphezu kwalokho, kunoma isiphi isimo ayikwazi usike izithelo umcibisholo nje ngaphansi nendinganiso eyodwa, uma kungenjalo kungaholela ungcolisa we amahlumela, iningi lazo ongeke ukwazi fatliquors, futhi ngenxa yalokho kwanoma iyiphi isitshalo ungatholi.
Phakathi yokuvuthwa amajikijolo kumele zisuswe iqabunga eduze amaqoqo amabili, ukuze kuqinisekiswe ukufinyelela okuhle ilanga futhi anikeze izithelo elikhanyayo, imibala egqamile. Kodwa konke kufanele kwenziwa ngesilinganiso esifanele, bese amagilebhisi Rizamat ziyojabula nawe nge ingila yawo!
Apple isihlahla eMoscow kamuva: incazelo ezihlukahlukene, isithombe, ukubuyekezwa
Meadowsweet Herb. Isicelo kanye izakhiwo
Ihhotela Aparthotel Sofia Mythos Beach 3 * (Crete / Bali, Greece): Izibuyekezo
"Evrofitnes" ku Academic metro station Petersburg
Ukwelashwa nokuvikelwa helminth izifo: ukulungiselela "Milbemaks" for namakati
I elingenamikhono izingalo kanye ifulege of Saint Petersburg
Ukuthembeka yabo bonke abakhululekileyo nabayizigqila ezithela
Indlela yokwenza i-logo ku-Photoshop: imfundo yabaqalayo